Madaxweyne Ku xigeenka iyo Maayarka Hargeysa oo u kicitimay dalka Sinigaal | Somaliland.Org
Madaxweyne Ku xigeenka iyo Maayarka Hargeysa oo u kicitimay dalka Sinigaal
December 2, 2012	Berbera (Somaliland.Org)-Madaxweyne ku xigeenka Somaliland Mudane C/raxmaan C/laahi Ismaaciil (Saylici) oo uu Weheliyo Maayarka Caasimada Hargaysa Eng Xuseen Maxamud Jiciir ayaa galabta u ambo baxay Wadanka Sinigaal oo ay kaga qayb galayaan Shir lagaga hadlayo Maamul wanaaga.
Shirkan oo sannadkiiba hal mar la qabto ayaa waxaa ka qayb qaata Madaxda Qaarada Afrika,kaas oo ah markii shanaad ee somaliland lagu marti qaado .
Madaxweyne ku xigeenka Somaliland Mudane C/raxmaan C/laahi Ismaaciil Saylici oo hadal kooban Warbaahinta ku siiyay Madaarka Magaalada Berbera ayaa sheegay in Shirkan lagu soo casuumay Somaliland isla markaana ay ka jeedin doonaan Warbixin tilmaamaysa hanaanka maamul wanaag ee Somaliland ka jira.
Madaxweyne Ku xigeenku waxa uu sheegay Shirkan oo sannadkiiba hal mar la qabto waxa ka qeyb geli doona Madaxda Qaarada Afrika.
Madaxweyne Ku xigeenka oo ka hadlayay shirkan ay ka qeyb galayaan wuxuu yidhi “Waxaanu ku soconaa shirkii lixaad ee loo qabto caasimaddaha afrika oo ay ka soo qeyb galayaan ergooyin ka badan shan kun oo ergay waxaana lagu faaqidayaa sidii dawladaha hoose u daadajin lahaayeen maamulka loona hirgelin lahaa.waxaanu halkaasi ka jeedin doonaa khudbad aanu kaga waramayno dalkeena iyo horumarkiisa.”
Md. C/Raxmaan Saylici waxa fariin u diray Xisbiyada iyo Ururadii ka qayb galay doorashadii Golaha deegaanka oo uu ugu baaqay. “Waxaan murashaxiinta iyo xisbiyadda u soo jeedinayaa in wixii shacbigu doortay lagu qanco oo laga wada shaqeeyo danaha qaranka Somaliland,”ayuu yidhi Madaxweyne Ku xigeenka Somaliland Md. C/Raxmaan Cabdilaahi Ismaaciil.
Previous PostTirinta Codadkii laga dhiibtay magaalooyinka waaweyn ee dalka oo socota iyo wer-werka murashaxiintaNext Post“Madaxweynaheenna ayaa tusaale inoo ah oo 80 cod ku waayay madaxtinimaddii 2003-dii”	Blog